Caalamka, 01 September 2019
Axad 1 September 2019
Tobneeyo qof oo lagu dilay Yemen
Dad ka badan 50 ruux ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaraha Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta maanta la beegsadeen xabsi ku yaalla magaalada Dhamar oo 130 km dhinaca koofureed kaga beegan magaalada Sanca.
Hindiya oo muwaadinnimada kala laabatay Ku dhawaad 2 milyan oo qof
Ku dhawaad laba milyan oo qof oo ku nool gobolka Assam ee dalka India ayaa wajahaya waddan la’aan, kaddib marki ay iska waayeen liiska dadka muwaadiniinta Hindiga ah oo ee maanta soo baxay.
Imaaraadka iyo dowladda Yemen oo ay ka tafan tahay
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xqiijisay inay weerar duqeyn ah ku qaadday magaalada Cadan ee dalka Yemen, ayada oo beegsaneysa “maleeshiyo argagixiso ah” kadib markii dowladda Yemen ay sheegtay in weerarka lagu qaaday ciidamadeeda.
Iran oo shuruud ku xirtay wada-hadallada Mareykanka
Wasiirka arrimaha dibedda Iran, Mohammad Javad Zarif ayaa sheegay in haddii Mareykanka ay wada-hadallo doonayaan, ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanaddii 2015 laga gaaray barnaamijka Nukliyeerka Iran.
Boqoradda Britain oo ansixisay in howl-gab laga dhigo baarlamanka
Boqoradda Britain, Queen Elizabeth ayaa aqbashay qorshaha Ra’iisul Wasaaraha Britain, Boris Johnson uu ku codsay in howl-gab laga dhigo baarlamaanka.
Laba weerar oo 'is-miidaamin ah' oo ka dhacay Gaza
Xamas ayaa sheegtay in laba qarax oo xalay ka dhacay Marinka Gaza ay ku dhinteen saddex sarkaal oo boolis ah, kuwaasi oo goobjoogeyaal ay ku qeexeen weeraro is-miidaamin ah.
Trump: Waxaa jirta fursad aan kula kulmi doono Rouhani
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay “inay jirto fursad wanaagsan” oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Iran Hassan Rouhani, toddobaadyada soo socda.
Israel oo shidaalka ka dhimeysa Gaza
Israel ayaa maanta sheegtay inay ilaa bar dhimeyso shidaalka ay siiso shirkadda kaliya ee korontada u qeybisa magaalada Gaza, ayada oo ka jawaabeysa gantaallo ay sheegtay in looga soo tuuray magaaladaas.
Yemen: Sacuudiga iyo Imaaraadka oo wada-hadal ku baaqay
Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda Yemen iyo kooxda gooni u goosadka koofureed, kaddib dagaalo ba’an oo dhawaan laba dhimac ku dhexmaray magaalooyin ku yaalla Koofurta Yemen.
Wada-hadallada Mareykanka iyo Shiinaha oo dib u billaabmaya
Madaxweyne Donald Trump ayaa Isniinta maanta ah sheegay in wada-xaajoodayaasha ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ay dhowaan dib u billaabi doonaan wada-hadalladooda, taasi oo uu ku qeexay tallaabo horey loogu qadaay dhameynta dagaalka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal.
Maraykanka iyo Taliban oo Heshiis ku Dhow
Wadahadalladaan oo soo maray sagaal wareeg, ayaa waxaa Mareykanka u matalaya diblamaasiga ku dhashay dalka Afghanstan balse heysta dhalashada Mareykanka ee Zalmay Khalilzad.